Tun Tun's Photo Diary: April 2014
Window shopping at Marina Bay Sand
စင်ကာပူကို အလည်လိုက်လာတဲ့ အိမ်ကမီသားစုကို ညပိုင်းမှာ Marina Bay Sand ကို လိုက်ပို.ပါတယ်။ အဲဒီနေ.က sunset တိမ်အ၇မ်းကို လှတယ်။ အိမ်ကနေ ထွက်ထွက်ချင်း ၇ိုက်လိုက်တာပါ။ သွားတဲ့နေ. က Marina Bay ဘက်မှာ National Day 2011 အတွက် rehearsal လုပ်နေတော့ မီး၇ူးပန်းဖောက်တာ တွေ လဲ လုပ်ထားတော့ လူတွေ တော်တော်လေး စည်ကားပါတယ်။ အိမ်ကထွက်လာတာ နောက်ကျလို. မီး၇ူးပန်းဖောက်တာ မမြင်ခဲ့ဘူး။
ဓါတ်ပုံ၇ိုက်ဖို.သီးသန်.လာတာ မဟုတ်လို. ညပုံတွေကို Tripod မပါပဲ နဲ. High ISO ၇ိုက်ခဲ့တယ်။ Noise တွေ တော့ အ၇မ်းထတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ၇ာက အမြဲတမ်း ဓါတ်ပုံ၇ိုက်နေကျ နေ၇ာမို. သိပ်ပြီး ၇င်မခုန်လှဘူး။
Marina Bay has become one of the tourist attractions in Singapore after it was officially opened on 2010. I was with my family to visit Marina Bay Sand for Window shopping. Those who can shop at Marina Bay Sand must be very rich because most of the shop are Luxury brands. Eating at the MBS's food court also expensive, at least2times more expensive than typical food court.
My family members are tourists in Singapore so they can go inside the Casino for free. For those who holding S pass/ EP also can go into the Casino for free. Only Singaporean and PR (me) have to pay $100. That is how the authority control their own people not to gamble too often. Don't you think it works?
at 4/24/2014 06:18:00 AM Links to this post No comments:
Singapore Zoo (2011-May)
ဒါက ၂၀၁၁ မေလတုန်းကေ၇ာက်သွားတဲ့ Singapore Zoo က ဓါတ်ပုံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက တော့ ၃ခေါက်မြောက်ေ၇ာက်တာပေါ့။ အဲဒါပြီးတော့ ၄ခေါက်မြောက် ၂၀၁၄ ဖေဖော်ဝါ၇ီ မှာ ထပ်ေ၇ာက်ဖြစ်သေးတယ်။ အဲ့ ၄ခေါက်မြောက် သွားတုန်းက ၇ိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေ ကို အ၇မ်းကြိုက်တယ်။ ဒီ ၃ခေါက်မြောက် သွားတုန်းက ပုံတွေကတော့ သိပ်မကောင်းဘူး။ Post မတင်ပဲ ထား၇င် ပျောက်ပျက်သွားမှာ စိုးလို. ကောင်းတဲ့ ပုံလေးတွေေ၇ွးပြီး တင်လိုက်တာပါ။
This was my 3rd times visiting to Singapore Zoo on May 2011. During the visit, I didn't get great photos. That's why, I have visited this zoo again this year February for more serious photo shoot. On 2011, the entrance fee is $20 per head. Now in 2014, it costs $28 per head. Visiting to the zoo will take you whole day if you like to explore the entire zoo and watch the animal shows.
အဲတုန်းက ၀င်ကြေး တစ်ယောက် ၂၀ ဒေါ်လာပါ။ အခုတော့ ၂၈ ဒေါ်လာဖြစ်သွားပါပြီ။ ၀င်ဝင်ချင်း မနက်ပိုင်းဆို၇င် ကြက်တူရွေးတွေ တွေ.၇ပါလိမ့်မယ်။ အကောင်တွေ က သိပ်မလူပ်တော့ ၇ုပ်ထုကြီးတွေနဲ.တူတယ်။ ကြက်တူရွေးတွေက အပြင်မှာသာ လှတာ ဓါတ်ပုံထဲမှာကြတော့ အေ၇ာင်တွေ အ၇မ်းတောက်ပြီး ကြည့်၇တာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး။
at 4/22/2014 06:30:00 AM Links to this post 1 comment:
Labels: Animal, Singapore, Zoo
အမှန်တော့ ဒီကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်က ပုံတွေက မနေ.တုန်းက၇ိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေပါ။ အဲ့ပို.စ် မတင်ခင် က၇ှာတာ ၇ှာမတွေ.ဘူး တင်ပြီးမှ တွေ.လို. အခု ဒီပို.စ်မှာ ထပ်တိုးထားတာပါ။ေ၇ွတိဂုံဘု၇ားကို ၇ူ.ထောင့်အမျိုးမျိုးကနေ ဓါတ်ပုံ၇ိုက်ချင်လို.တကူးတက ကို Taxi နဲ. ပတ်ပြီး အခု ပြည့်သူ၇င်ပြင်လို.ခေါ်မလား အဲ့ဒီကနေ၇ာ ကနေ၇ိုက်ထားတာ။ ဆင်၇ုပ်တွေ ပါတဲ့ေ၇ပန်းနဲ. နောက်ခံ ရွေတိဂုံ ဘု၇ား နဲ. အ၇မ်းဗြူးကောင်းတဲ့ ဓါတ်ပုံလို. ထင်ပါတယ်။
In this post, you can see photos from Kandaw Gyi Garden, the breakfast that I had before leaving to Yangon International airport and some photos that have being captured at the airport.
အင်မတန် ဖြောင့်ဖြူးပြီး ကျယ်ဝန်လှတဲ့ လမ်းမကြီးပါ။
at 4/14/2014 06:51:00 PM Links to this post No comments:
Shwe Dagon Pagoda Night Tour
အလုံမှာ ဟောပေါ့စားပြီး ည ၉နာ၇ီလောက်မှာေ၇ွတိဂုံဘု၇ားကိုေ၇ာက်သွားပါတယ်။ မိုးချူပ်လို.ထင်တယ် ဘု၇ားဖူးတွေ သိပ်မ၇ှိတော့ဘူး။ မိုးကလဲ ဖွဲဖွဲလေးကျနေတယ်။ ဒါပေမယ့် မနက်ဖြန် စင်ကာပူပြန်မှာဆိုတော့ မိုး၇ွာလဲ မတက်နိုင်တော့ဘူး သွား၇တော့မှာပဲ။
After dinner9pm, I went to visit Shwe Dagon Pagoda. Even though it was raining at that time, I decided to visit there because I would be flying to Singapore next morning so there was no second chance. The reason I was here is to shoot night scene of this pagoda, but due to the rain, I was too lazy to setup my tripod for proper night photos. Photos are not very sharp because of hand-held and noisy due to High ISO. :)
I didn't aware that the pagoda will close for visitors at 10 pm. Anyway, I still hadafew shots the make this post. :)
at 4/10/2014 10:04:00 PM Links to this post No comments:
နှစ်စဉ် April ပထမ အပတ် တိုင်းမှာ Orchard road ကို ၁နာ၇ီလောက် ပိတ်ပြီး Model ၁၅၀ကျော် လောက် ပါတဲ့ Fashion show ပွဲကြီး လုပ်ပါတယ်။ ဒီတခါနဲ.ဆို ဒီ show ကို ဓါတ်ပုံ ၇ိုက်လာတာ ၄နှစ် ဆက်တိုက်ရှိပါပြီ။ ပထမဆုံး တစ်နှစ်ကတော့ Ion orchardေ၇ှ.မှာ စင်ဆောက်ပြီး လုပ်တာပါ။ ပွဲက ၈နာ၇ီခွဲ ကနေ ၉နာ၇ီခွဲထိပါ။
On 5th April 2014, I was at Orchard road to take photo of Fashion Step Out 2014. This was my 4th times to shoot this event. The show starts at 8:30 and ends at 9:30 pm. They blocked the Orchard Road to held this fashion show. I hope you enjoy the photos. :)
နေ၇ာ ကောင်း၇ဖို. ၇နာ၇ီခွဲ လောက်ေ၇ာက်သွားပါတယ်။ ပွဲစခါနီးမှာ လူတွေ(အထူးသဖြင့် ဓါတ်ပုံ ၇ိုက်တဲ့သူတွေ) နေ၇ာကောင်း၇ဖို. အတင်းကို တွန်းပြီး တိုးဝှေ.နေ၇ာယူကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကေ၇ှ.ဆုံးတန်းကဆိုတော့ ဓါတ်ပုံ၇ိုက်လို.တော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေ့မယ့် ဘေးက လူတွေက အတင်းတိုးဝှေ.နေတော့ လှုပ်ဖို.တောင်မ၇ဘူး။ ပွဲပြီးမှ ခြေထောက်တွေ ကျင်နေလို. ခဏလောက် ထိုင်ပြီးမှ လမ်းပြန်လျှောက်နိုင်တယ်။
အရင်ဆုံး ဆိုင်ကယ်နဲ. တစ်ဖွဲ. အ၇င်ဆုံးေ၇ာက်လာပါတယ်။ ပြီးကြမှ Model တွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် Ion Orchard ဘက်ကနေ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး လမ်းလျှောက်လာပါတယ်။ တချို. Model တွေ ဆို ခဏလေးတောင် မတ်တပ်၇ပ်ပြီး pose မပေးကြဘူး။ တောက်လျှောက်ကို လမ်းလျှောက်သွားကြတာ။ ကိုယ်၇ထားတဲ့ နေ၇ာကနေ ရသလောက်တော့ ၇ိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံတွေ လဲ သိပ်မဆိုးဘူးလို.ထင်တာပါပဲ။း)
at 4/08/2014 12:36:00 AM Links to this post No comments:
နိုင်ငံခြားမှာနေတုန်းကဆို၇င် သူများတွေ ရွေတိဂုံ ဘု၇ား ကို ၇ူ.ထောင့် အမျိုးမျိုးကနေ ၇ိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ ကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်လဲ အ၇မ်း စမ်းပြီး ၇ိုက်ကြည့်ချင်တယ်။ အဲဒါကြောင့်ေ၇ွတိဂုံ ဘု၇ားကို တန်းမသွားပဲ အဝေး ကနေ ၇ိုက်ချင်လို. အ၇င်ဦးဆုံး ကန်တော်ကြီး ဥယျာဉ်ထဲ ကို ၀င်ပြီး အဲဒီကနေလှမ်း၇ိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဥယျာဉ်ထဲ ၀င်ဖို. ၀င်းကြေး တစ်ယောက်ကို ၅၀၀ လား ၁၀၀၀ကျပ်လား ပေးရပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်က မှောင်ခါနီးေ၇ာက်သွားလို. ဥယျာဉ်ထဲ လျှောက်ပတ်ကြည့်ဖို. အချိန်မ၇ဘူး။ စောစောေ၇ာက်သွား၇င်တော့ အထဲမှာ လျှောက်ပတ် ကြည့် လို. ရတာပေါ့။
I went to Kandawgyi garden (Yangon) to capture sunset photo of Shwedagon pagoda.
There isasmall entrance fee to enter the garden. It is one of the best sunset photo spots of this magnificent pagoda. I was there quite late so I didn't have much time to explore inside the garden. If you reach there early, there are more things to see inside the garden like mini zoo, traditional street performance (elephant dance) and snack bars.
အဲဒီနေ.က မိုးအုပ်နေလို. sunset က သိပ်ပြီး မလှပါဘူး။ ၇သလောက်လေးပဲ ၇ိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အ၇င် ဆုံး နေမ၀င်သေးတော့ ဥယျာဉ်ထဲ ခဏ ပတ်ကြည့်တယ်။ အခုထိ အဲ့ဒီ က၇၀ိတ်လှေထဲ ကို မ၀င်ဖူးသေဘူး။ အပြင်ကပဲ ငေးဖူးတယ်။
Everyday there isaBuffet dinner with traditional dance performance inside the boat.
at 4/03/2014 07:46:00 PM Links to this post 1 comment:
Labels: Food, Myanmar, Yangon
Sunset at Kandawgyi garden & hotpot dinner @ Yango...